INKOMBANKOMBANE KWEYENKOHLAKALO EZULULAND - Ilanga News
Home Izindaba INKOMBANKOMBANE KWEYENKOHLAKALO EZULULAND
YIMEYA kaMasipala wesiFunda iZululand uMfu Thulasizwe Buthelezi.
MTHOBISI SITHOLE KUSOLWA amakhansela e-ANC kuMasipala wesifunda iZululand ”ngokufukamela inkohlakalo” emuva kokuduba ashiye umhlangano ngoLwesihlanu, kwethulwa umbiko ngenkohlakalo kaR15 million wokukhandwa kwezimoto zikamasipala. Kuthiwa izisebenzi bezizixebulela umkhoma, zihlangene nezinkampani obekukhandwa kuzo izimoto zithi zikhandiwe kanti cha, kwesinye isikhathi zikhandwe ngemali engaphezulu kakhulu kobekufanele ikhokhwe umasipala. Le nkohlakalo okuthiwa yaqala ngo-2019 ivezwe yinkampani iNMK Forensics, ebijutshwe ukuthi iphenye emuva kokuba umasipala ubone ukuthi kukhona okushaya amanzi ngokufa kwezimoto zibe zikhokhelwa imali eshisiwe, zilungiswa.
Ikhansela elingumthombo waleli phephandaba lithi ngesikhathi kufundwa umbiko kuvelile ukuthi lesi sisebenzi esingungqondongqondo kule nkohlakalo besidlulisela lezi zinkampani izicelo zokukhokhelwa (invoices) wumasipala ebhange eliphethe isikhwama sikamasipala uAbsa, bese nalo likhokhe ngaphandle kokucubungulisisa.Kwase kuvunyelwana ngokuthi nalo ibhange kuzomele lifakwe icala liyikhokhe le mali. “Amakhansela awo wonke amaqembu avumelane ngazwi linye ukuthi abathinteka kule nkohlakalo mabathathelwe izinyathelo zomthetho nokuyilapho i-ANC iphume emhlanganweni ithi iyokhokhasa yaze yabuya sekuphele isikhathi.
“Okusikhombisa ngokusobala ukuthi ibingahambisani nesinqumo esithathiwe sokuthi kuboshwe abenza inkohlakalo njengoba lesi sisebenzi singuKhongolose besivikela,” kusho lo mthombo. USekela sihlalo kwi-ANC eMzala Nxumalo Region, uMnu Khaya Khumalo, uthi okubenze baphuma bayokhokhasa wukuthi lo mbiko abebethulelwa wona ubususefiwe, kwakhishwa igama le-CFO nemenenja okuyibo abasayinayo ngaphambi kokuthi kukhokhwe kwazofaka igama lesisisebenzi esile emsileni. “Inkampani ebijutshwe ukuphenya kungani ingasethuleli yona umbiko kodwa wethulwe yibo? Angithi bese bekhiphe ko-nke okubathintayo.
“Kunombiko ka Mdledle owenziwa wuCogta ngo-2020, okufanele kuboshwe iMeya ngawo esithi thina le mibiko mayithathelwe izinqumo ezifanayo, baboshwe abathintekayo nawo lo sinikwe oyiwona wethulwe yinkampani ebiwenza, hhayi lo abawusefile okungasewona ngoba siwubonile owangempela. “Sithe sibuya ukuyokhokhasa singakawabeki amaphuzu ethu, bathi makuthandazwe sekuyavalwa okuyinto abahlale beyenza uma kufanele kukhulunywe izinto,” kusho uMnu Khumalo. Imeya kaMasipala wesiFunda iZululand uMfu Thulasizwe Buthelezi iphefumula, ithe: “Kufana nayo i-ANC ukuthi izwelane nabenzi benkohlakalo. Umbiko kaMdledle ka-2020 kwakuyinganekwane yomlolozelo okumanje uphambi kwezithebe zenkantolo eMgungundlovu okulindwe isinqumo sejaji uChili ngawo. “Thina njenge-lFP sa-sishilo sisakhankasa ukuthi sizolwa nenkohlakalo, namanje sizoqhubeka si-lwisane nayo okungakhathaleki ukuthi ithinta liphi iqembu, siqashe abantu baseZululand abazimisele ngokusebenzela umphakathi ngokwethembeka,” kusho iMeya.
Previous articleIzidumbu (58) ezingaziwa emakhazeni aseThekwini
Next articleOsomatekisi baseNanda bakhe amabhuloho